Ny iray amin'ireo legioma lohataona voalohany eo amin'ny talantalana dia miteraka radioma. Tsy trano fambolena, izay avy ao amin'ny zaridaina. Azonao atao ny mamorona azy ireo fotsiny, mameno ny vatana miaraka amin'ny vitamina, na afaka manomana salady rady ianao amin'ny fampidirana karazan-tsakafo samihafa ho an'ny recipe. Kiraka, tsaramaso, kôkômba, brynza, peas ary, eny, ny hamaka tanteraka.
Manomboha salady hoho avy amin'ny fisafidianana andian'olom-bary, mba tsy hisian'ny ravina malemy. Efa nofinidinao ve? Dia sasao moramora avy eo, atsofohy ny tops ary manamboara salady voalohany.
Salady Radizy miaraka amin'ny fofomamy
Ny fanomanana an'io salady io dia tsy dia mampanahy loatra. Ary ny siramamy, ny vokatra dia tsara kalorie, azonao atao tsara ny manolo ranom-boalavo ny ondry. Kanefa, amin'ity tranga ity dia tsy ilaina intsony ny mani-sira ny salady, satria ny salady sy ny vokatra dia ampy tsara.
Tavoahangy maitso - 2 tbsp. lovia kely;
Nopotehinay ilay kofehy tamin'ny antsasaky ny boribory, nampangotrahina tamin'ny rano mangotraka ary namela ny rano hosotroina. Noho izany dia hanaisotra ny alahelo avy amin'ireo tongolobe, izay tsy ilaina ao anaty salady. Raha "nilentika" ireo tongolobe, dia nesorinay ny rambony sy ny tampon-doha avy amin'ny radisy, napaka tao anaty faribolana ary napetraka tao anaty vilia salady. Manary fay isika, manapaka atody kely mofomamy ary manambatra azy amin'ny radi. Ampio ireo zôbôly, ahi-maitso ary zozoro maitso. Solim, dipoavatra, mameno ny salady rady miaraka amin'ny menaka oliva ary mamafy ahitra. Azonao atao ny manolo ny menaka oliva amin'ny mayonnaise.
Salady misy radisy sy voatabia
Ho an'ity salady ity dia afaka mandray tsimok'aretina tsotra sy kirihitra, izay hameno tsara ny salady radi miaraka amin'ny habeny mitovy habe amin'ny radish. Kirira ampy mba hikirakira antsasak'adiny.
lettuce green -100 g;
voatabia - 100 g;
sira, zava-manitra - manandrana;
menaka oliva - manandrana.
Sasao tsara ny rady, esory ny rambony sy ny tampony ary tapaho ny peratra. Salady no nosafidianay, nosasana ihany koa, penina maina sy maina. Ampio amin'ny radish, eo koa ny voatabia voatabia (eo amin'ny tranokala na tsiranoka, arakaraka ny safidy tianao). Solim, dipoavatra ary vanimpotoana misy menaka oliva. Ny ingredients rehetra dia mifangaro indray ary afaka manompo salady mofomamy mamy ho an'ny latabatra isika.
Salady avy amin'ny radisy sy karaoty
Ny fikolokoloana ny salady voankazo dia tsy voatery manolotra menaka oliva. Afaka manolo izany ianao amin'ny kefir, siramamy, mayonaise na sira. Manoro soso-kevitra ny manandrana karazan-tsakafo miaraka amin'ny radi iray ianao, izay mahavariana amin'ny kefir, safidy amin'ny sakafo sy maivana.
kôkômbra - 2-3 sombintsombiny;
Mba hanomanana salady salady, alao ny voanio fotsy. Avy eo dia hampiasa ny tanany isika ary hamela azy handry vetivety. Ny tongolobe sy kôkômbia dia nanapaka ny antsasaky ny elany, nanala ny radisy avy any ambony izahay ary nanapaka ny peratra. Ny singa rehetra dia mifangaro, mifangaro amin'ny kefir, sira ary ampidirina ao anaty vilia salady. Mamboly voaloboka izahay. Raha azo atao, afaka manolo ny vokatra ronono hafa ny kefir ka mahandro, ohatra, salady radioma misy menaka araka ny filazana mitovy. Etsy ankilany, afaka manolo ny tongolo ihany koa ianao - raha tokony hampiasa menaka maitso, avelao ny salady hiverina ho lohataona indrindra!
Trondro voankazo misy legioma
Roast ao anaty vilany
Sakafo avy amin'ny cod - recipe
"Garnet Bracelet" - resipe
Fritter avy amin'ny courgettes sy ny ovy
Ahoana ny handraisanao vary?
Hepatic fritters - sakafo mahasalama ho an'ny sakafo antoandro na sakafo fihinanana homemade
Shaurma - fomba mahazatra mahasalama mahandro sakafo ao an-trano
Salady misy salmon
Nofaritan'i Justin Bieber ny asany tamin'ny taombaovao
Ahoana no hanokafana ny kafe ankizy?
Alessandra Ambrosio sy Rita Ora dia nanatri-maso ny sarimihetsika Love Love
Asa tsotra ho an'ny vehivavy bevohoka
Rosiana Mamy - Sarobidy kalorika
Pinworms amin'ny ankizy - fitsaboana
Ny alina mamy amin'ny vehivavy
Ahoana no fomba fitsaboana dysbiosis?
Fanafody fanaraha-maso ho an'ny reny mampinono
Oat for levitra
Inona no dikan'ny môle?
Noho ny famonoana ny socle?